IINDIDI ZEZITULO EZI-ROCKING (ISIKHOKELO SOKUTHENGA SOKUGCINA) - IFANITSHALA
Eyona Ifanitshala Iindidi zeZitulo ezi-rocking (Isikhokelo sokuthenga sokuGcina)
Iindidi zeZitulo ezi-rocking (Isikhokelo sokuthenga sokuGcina)
Wamkelekile kwigalari yethu ebonisa iintlobo zezitulo ezinyikimayo kubandakanya neendlela ezahlukeneyo zoyilo.
Inqaku eliqhelekileyo elingaphantsi kwefanitshala yisitulo sokugungqa esidala. Uninzi lwethu ludibanisa ezi zitulo kunye neenkumbulo ezimnandi zobuntwana ngeentsasa ezicothayo kunye nemva kwemini enobuvila kunye noMama noPop. Kwaye kufanelekile, kuba izitulo zokugungqisa zihlala zinxulunyaniswa nokuba ngumzali. Izitulo ezi-rocking zihlala zisetyenziswa ngabazali abatsha ukuthomalalisa iintsana ngokuthamba kwazo.
Uhlaziyo lomtshato weenwele ezinde
Umsebenzi wokukhulisa abantwana ecaleni, uninzi lwabantu abadala bayasonwabela isitulo sokugungqa ngokwabo ngenxa yemisebenzi yaso yokuphumla kunye nokuphumla. Ngokwenzululwazi, ukunyikima okuthambileyo kunceda kakhulu ekuboneleleni ngamaxesha okulala ngokukhawuleza. Izitulo zokugungqa zikwanokuthambeka, ii-angles zokuthambisa zibonelela ngezibonelelo ze-ergonomic ezinkulu kubasebenzisi. Ndwendwela eli phepha kwigalari yethu eyaziwayo iintlobo zezitulo ingaphakathi.
Isihlalo sokuGungqa uyilo
Isikhokelo sokuthenga isihlalo sokugungqa
USihlalo wokuGungqa kweMveli
Sihlalo weGlider Rocking
Usihlalo weSky Rocking
Usihlalo ohleliyo wokuGungqa
Iindidi ezahlukeneyo zokuSebenzisa iiZitulo eziShukumayo
USihlalo wokuGungqa abahlengikazi
I-Patio okanye i-Porch Rocking Chair
Izibonelelo zezeMpilo zeZitulo ezi-Rocking
Iingcamango zikaSihlalo oPholileyo
# 1 UKonwabela uSihlalo oShukumayo oMdaka nge-Plush Cushioning
# 2 Sihlalo esimhlophe sokuGungqa ngoku
# 3 USihlalo oMncinci wokuShukumisa aMatye kunye neeWood Rockers
# 4 USihlalo oShukumisayo weSikhumba oMnyama onesakhelo seNsimbi engenasici
# 5 Sihlalo seLounge Rocking Modern
# 6 Wicker Swivel Rocking Chair
# 7 Sihlalo esimhlophe sokuGungqa ngoku
# 8 Isihlalo sokuGungqa se-Mid Century se-Ottoman
Sihlalo we # 9 weCottage Rocking
# 10 Isitulo soMdlalo wokuDlala
# 11 Sihlalo woLwandle oluLwandle oluLuhlaza
# 12 Sihlalo wangaphandle wePatio
# 13 isitayile saseDanish esiSihlalo esiShukumayo
# 14 Isitulo sokuGungqa kweVelvet
# 15 uSihlalo oLongezelelekileyo oLinganayo
Izitulo zokugungqa ziyaziwa ukuba bezisetyenziswa kwangoko nge-1700s. Yayinentwana yokuthandwa ekuqaleni kwenkulungwane ye-18 eMntla Melika kwaye yayizizitulo ezirhangqwe ziijaji ezinamatye aqhotyoshelwe kuzo. Intsomi eyaziwayo nangona ingachananga ngokwembali kukuba izitulo zokugungqa zenziwa ngu-Benjamin Franklin. Ngokwenyani bayaziwa ukuba bebesetyenziswa ngokuxhaphakileyo xa uFranklin wayesengumntwana, kwaye ke imihla ayikhangeli.
Ngomnyaka we-1725, isihlalo esiqhekezayo sasasazeka eNgilani kwaye kungekudala, izitulo zokugungqa i-wicker zazininzi okanye zincinci indawo yazo njengesiqhelo saseMelika nesiNgesi kwimizi emininzi ngelo xesha. Ingaphezulu kwekhulu leminyaka kamva, ingcibi yaseJamani uMichael Thonet wayila isitulo sokuqala sokugungqa i-bentwood-iqhekeza lomyili elithandwayo ngobabalo, ubuhle, kunye nobunzima bokukhanya.
I-1900s yabona inani elikhulu lezinto ezintsha kwisitulo sokugungqa. Izitulo ezisongelayo ezisongelayo bezithatha ingcambu ngenxa yokusebenziseka kwazo kunye nokusebenza kwazo; Iintsapho zinokubakhupha baye kwiipikniki okanye kuhambo olude olunengxaki. Kule mihla, akuqhelekanga ukubona iziqwenga zesitulo somyili ezihombisa amakhaya kwiintsapho ezininzi.
Ngokuqala kolwakhiwo lwanamhlanje kunye neetekhnoloji yezinto eziphathekayo, isitulo sokugungqa sihambe indlela ende. Ukusebenza okutsha okuhlukeneyo kunye neendlela zokwakha zikhokelele kwiindidi ezahlukeneyo zosihlalo. Apha ngezantsi kukho ezona ntlobo zaziwayo zokuyilwa kwesitulo ukuze ufumane eyona ilungele iimfuno zakho.
Kukho irocker yemveli. Ezi zibonakaliswa yimilenze egobileyo esebenza njengesihlalo esihlala sijikeleza ngapha nangapha. Olu hlobo lwesitulo sokugungqa luhlobo oluqhelekileyo nolona lufikelelekayo. Ngoyilo oluvavanywe ixesha, ikwayindawo ethandwa kuzo zonke iintlobo. Iindlela ezisezantsi zolu hlobo zibandakanya ukuba ziqinile kwaye zingenakuguqulwa kwaye ubukhulu becala indawo yomgangatho efunekayo ukuze isebenze.
Isitulo sokugungqisa iGlider
Uhlobo lwesibini yirocker ebalekayo. Into enzima ngakumbi kunokwenziwa kwesitulo sokwenyikima, ii-glider rockers zisebenzisa indlela yokuxhathisa kunye neehenjisi ezinje ngokuba isitulo sijikeleze emva naphambili kwindiza ethe tyaba, ngokuchasene ne-arc yemveli.
Olu hlobo lwezihlalo lutya indawo encinci kwaye luthathwa njengolukhulu ngakumbi kunezinye iintlobo zerockers. Nangona kunjalo, ngenxa yoyilo lwayo oluntsonkothileyo, i-glider rocker ixabisa kancinci ngaphezulu kwezinye iintlobo kwaye ithambekele ekophuleni.
I-rockers yasentwasahlobo ingumxube wesitulo sokugungqa kwendabuko kunye nesihlalo sokugungqisa isihlalo. Bayagungqa ngapha nangapha njengesiqhelo, kodwa baxhaswa yimithombo enyusiweyo ebangela ukunyikima.
Indlela yokusebenza sisiqwengana sobunzima kubunjineli; Uninzi lwabaqulunqi bakhetha ukuyifihla phantsi kwebhokisi emazantsi esitulo ukukhusela nakuphi na ukudibana okungafunekiyo kunye nexabiso lobuhle. Ezi ndidi zezitulo ezinyikimisayo zizinzile kwaye phakathi kumaxabiso amaxabiso eerocker zemveli kunye neerocker rocker.
Iirockers ezijikelezayo zezo zisebenzisa indlela evumela ukuba inyikime ngaphezulu kwenqwelomoya enye yokuhamba. Ungalusebenzisa olu hlobo lokusebenza kwi-glider okanye i-rockers yasentwasahlobo ukwandisa ukusebenza kwazo kunye nentuthuzelo. Njengakwezinye iintlobo, ukwanda okuthuthuzelayo kunye nokuguquguquka kweswidi esitshintshayo kuziswa kuyilo oluntsonkothileyo. Kananjalo, ixabiso layo kunye nomngcipheko wokophuka nazo ziyenyuka.
Uhlobo lokugqibela lwerocker ekufuneka uyiqaphele lilitye elihleliyo. Njengoko igama lisitsho, aba rocker ngabo banemisebenzi esebenzayo ekuvumela ukuba uhlale ngasemva esihlalweni. Kananjalo, oku kuyathandwa ngabanini bamakhaya abathanda kakhulu izitulo zokuphumla. Ngokwesiqhelo, ezi zitulo azikuvumeli ukuba usebenzise imisebenzi yazo yokugungqisa kunye nokuhlala ngaxeshanye; ukhetha enye okanye enye. Oku kwenzelwa ukhuseleko. Ukuntsokotha koyilo kukwenza ukuba le ibe yeyenye yeendleko zokugungqa izitulo.
Iindidi ezahlukeneyo zikwasuka kwiindlela zabo zobuhle, ezinje ngeMid-century yanamhlanje, iGlam, iMission, kunye neNeo-colonial. Kukho izinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo njenge-wicker, iinkuni eziqinileyo, iiplastiki ezomeleleyo, ulusu kunye nesinyithi.
I-teknoloji yesitulo se-Rocking iye yandisa isiqwenga esilungileyo ukususela kwiintsuku zikaMama ka-Whistler. Kukho iintlobo ezimbalwa ezisisiseko zesitulo sokugungqa, ngasinye sinokuthi siyilelwe kwisitayile esithile okanye sakhiwe ngezinto ezahlukeneyo. Ezinye zeendlela eziqhelekileyo zokugungqa isitulo zibandakanya iMishini, iDanish Modern kunye neplush. Izinto zokwakha eziqhelekileyo zibandakanya iinkuni, iwicker kunye nePVC, kunye neepads ezivela kumalaphu, ngesikhumba okanye IVinyl.
Kunye neentlobo zokugungqa izitulo, zikwanokusetyenziswa okwahlukileyo kubandakanya ukonga umntwana okanye ukumngcangcazelisa umntwana ukuba alale, ehleli kwiveranda engaphambili okanye kwipatiyo yangasemva kwendlu kunye nokuphucula impilo yengqondo, kunye nezinye ekwabelwana ngazo ngezantsi:
Xa ukhetha isitulo sokugungqa kwindawo yokugcina abantwana bakho kubalulekile ukuba ube unokuhlala kamnandi kangangexesha elide. Ukonga okanye ukunyikimisa umntwana oleleyo ukuze alale kungathatha ixesha, ke uya kuqala ufuna isihlalo esikulungeleyo. Kulabo baya kuncancisa, unokufuna ukuqinisekisa ukuba isitulo sakho sineendawo zokubeka iingalo ezibanzi ngokwaneleyo ukuxhasa ngokupheleleyo iingalo zakho ngelixa ubekwa ngcono.
Izitulo zokugungqisa ngeenyawo ezinokubakho zinokudityaniswa kakuhle koomama abafuna ukuphakamisa iinyawo zabo. Ngokunyusa iinyawo ungasusa uxinzelelo kumqolo osezantsi kwaye uncede ukunciphisa uxinzelelo.
Enye into ekufuneka uyijongile kwisitulo sokugungqisa indawo yokugcina abantwana kukhuseleko. Izitulo ezininzi ezinyikimisayo zinegama elibi lokucofa abantwana abonwabisayo abayisebenzisa njengendawo yokuzivocavoca ehlathini. Ukukunceda ukunqanda oku unokuqinisekisa ukuba usihlalo owufumanayo unendlela yokutshixa ukutyibilika okanye ukungqengqa ekusebenzeni. Uyakufuna kwakhona ukuqaphela ukuba isitulo sinazo zonke iigiya kunye nemiphetho erhabaxa ngaphandle kokufikelela kwiminwe kunye neenzwane ezincinci.
Ukukhetha isihlalo esinokucoca ilaphu ngokulula yenye into enokwenza ubomi bakho bube lula. I-Micro-fiber ihlala ikhethwa ngokuthandwayo kunye nofele kuba zombini zinokucinywa ngokulula emva kokuchitheka. Ezinye iifayibha zinokukhuselwa, nangona kunjalo, khumbula iikhemikhali ezikwezi mveliso ezinokuthi zidibane nolutsha.
Xa ukhetha isitulo esihlaziyayo esiya kunyikima uya kufuna esinika inkxaso eninzi emva, iindawo zokubeka iingalo ezikhululekileyo kunye nokuhamba okugudileyo okugudileyo. Ukuba ujonge isitulo ikakhulu ukukhutshwa koxinzelelo khetha isitulo nge-backrest edibeneyo enika eyona ntuthuzelo.
Kwipatio egutyungelweyo okanye esitulweni sokugungqa iveranda kukho iintlobo ezithile zeenkuni ezibambe ngcono kunezinye. Ezimbalwa zeemithi ezisetyenziswayo yitek, umsedare okanye itsheri yaseBrazil. Olunye ukhetho sisihlalo esakhiwe ngamaplanga e-HDPE eyintsimbi eyomeleleyo neyomeleleyo emanzini nasemoyeni.
Kuhlala kumnandi ukonwabela ukugungqa kwiveranda yakho nomnye umntu. Ukuba ufuna ukuthenga ngaphezulu kwesinye, qiniseka ukuba ulinganisa indawo yakho kwaye ukhethe isitayile sosihlalo esiya kulunga ngaphezulu kwesinye.
Sebenzisa isitulo sokugungqa ngokumangalisayo kubonisiwe ukunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo kubantu abadala kunye nabo banengxaki yeendlela ezinzima zesifo sengqondo esixhalabisayo. Isindululo sokunyikima sibonisiwe ukuba sikhuphe ii-endorphins ezinokuphakamisa imeko yabantu abadala kunye nokunceda ukuthomalalisa iintsana. Nalu udibaniso olukhawulezileyo lwezinye zezona zibonelelo zempilo zidumileyo:
Ukunyikima kunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo
Isindululo sonyusa ukuhamba kwegazi emzimbeni
Inceda ukuphucula ibhalansi
Ngamana unokunceda ngeentlungu zangasemva
Nazi iimbono zethu eziphezulu ezipholileyo zokugungqa isitulo ezibandakanya iintlobo ezahlukeneyo zoyilo:
(Jonga esi sihlalo sithe xibilili eWayfair)
Esi sihlalo siyinyikimisayo uyilo lwezitulo ezicocekileyo, zangoku, kwaye siqhayisa ngobuhle obulinganayo obumnandi nobonwabisayo. Imibala epholileyo enemibala epholileyo yokuhombisa imidlalo yezinto ezithile ezongeziweyo zokufumana nje intuthuzelo eyongezelelweyo, ngelixa uyilo lweqhosha elikhutshiweyo linika ixabiso elihle lobuhle. Ukugqitywa okumnyama okumnyama kwisiseko esomeleleyo seeruberwood nayo ikukuchukumisa okuhle. Lilonke, esi siqwenga somlingisi sokugungqa isiqwenga silungele amagumbi okuhlala okanye amagumbi osapho anokufuna isitulo esimnandi sokuqaqambisa indawo kancinci.
(Jonga esi sihlalo simhlophe sokugungqisa eWayfair)
Uyilo lwesihlalo esithusayo sibonisa ukujonga phambili, isibindi, kunye nokujonga okuncinci okunesitayile se-bot kunye nokuqina. Isiseko sayo se-cantilever sinesakhelo esomeleleyo, sangaphakathi sentsimbi kunye nomxholo kunye neqokobhe le-bentwood. Isiseko se-cantilever sitsho ukuba isitulo sisebenze njengesihlalo sokugungqisa ngelixa sigcina ulwakhiwo luzinzile kwaye lulula. I-upholstery yenziwe nge-100% yomqhaphu kwaye iyasuswa ukuze umnini abe lula - kulula ukuyikhupha kwaye uyihlambe. Umhlangano uthe tye-phambili njengoyilo kwaye akufuneki ube yingxaki yokwenza.
(Jonga esi sihlalo sincinci sinyikima eWayfair)
Apha sinesiqwenga esahluke kancinane kumgangatho wesiqhelo kunye nokugungqiswa kwesitulo. Idlala isitulo se-fiberglass ebunjiweyo kunye nokuhamba, i-curvilinear, isali ye-ergonomic kunye nokuphumla kwengalo ekufuneka ikwazi ukulungiselela abasebenzisi bokugqibela ngokufanelekileyo. Ukwakhiwa kwesiqwenga esinye esiqinileyo kwesi sihlalo sikwanika ukubukeka okuthe tye, okwangoku ukuba zimbalwa ezinye izitulo ezityibilikayo ezinokulingana. Esi sihlalo sikhuselwe kwisiseko somthi esenziwe ngeplanga ngesakhelo esomeleleyo sentsimbi. Olu hlobo lwesihlalo esishukumisayo silungile kwabo bathanda ukusebenza kunye nokuthuthuzelwa kwesitulo sokugungqa kodwa bekhangela uhlaziyo oluhlaziyiweyo, lobuhle bangoku.
(Jonga esi sihlalo siqhuqha isitulo eWayfair)
ukutshintsha igama lakho kwiofisi yokhuseleko loluntu
Ibhalansi egqibeleleyo phakathi kwefom kunye nomsebenzi kuko konke ukuyila okuhle okunqwenelekayo. Esi sihlalo sigungqisayo siza kufutshane naleyo. I-sleeve yayo emhlophe emhlophe eyenziwe ngofele ihamba ngokumangalisayo kunye ne-chrome igqibile isiseko sensimbi esingenasici kunye nesakhelo. Imibala engathathi hlangothi mayibe bhetyebhetye njengoko ifuna, ihamba noluhlu olubanzi lweendlela zoyilo lwangaphakathi. Ulwakhiwo kunye nokusebenza kwesi situlo sinyikima siqinile kwaye somelele, nto leyo iyimfuneko kuba nayiphi na ifanitshala enezinto ezihambayo ziya kuba phantsi koxinzelelo oluthile. Esi sihlalo sinyikimayo sihle, songezwa ngokucocekileyo kuyo nayiphi na indawo yokuhlala ekhayeni lakho.
(Jonga esi sihlalo sokuhlala sinyikima eWayfair)
Esinye isitulo esixhonyiweyo esikhethekileyo, esi siqwenga somdlalo uyilo olwenza ukuba ugqatso lwangaphakathi lwangaphakathi lweemoto ze-70s kunye nee-80s. Isiseko senziwe ngomgubo omnyama osongwe ngentsimbi kwaye senziwe ngendlela elula kodwa ebethayo. Baze beze nemicu yokucinga enomdla kumazantsi amatye ukukhusela imigangatho yakho nakweyiphi na into enokubakho. Isihlalo ngokwaso si-polyester kunye nokudityaniswa komqhaphu kunye nokutshaya okutshisiweyo, okungwevu okugrey. Usihlalo kuyo yonke into sisiqwenga sangoku kunye nesitayile esiya kuhamba kakuhle ngaphakathi ngaphakathi.
(Jonga esi sihlalo sijikelezayo sijijayo eWayfair)
Esi sihlalo sokugungqisa i-rattan sibonisa amandla okujika kunye nelitye ngelixa uphumle. Eyilwe ukuba isetyenziswe ngaphakathi endlwini le rocker isitayile yomelele kwaye ihambelana ngokwaneleyo ukuba ingene ngaphakathi kwigumbi lokulala elincinci. Usihlalo unolungelelwaniso olubanzi lwamalaphu onokuthi ukhethe kuwo ukuvumela ukuba ukhethe elona lihambelana nencasa yakho yobuqu.
(Jonga esi sihlalo sasimhlophe sokugungqa isitayile eWayfair)
Esi sihlalo esimhlophe sokuhonjiswa kwesitayile sanamhlanje sinentambo yokuluka edityanisiweyo evela kwisithethe sexesha likaMayan lokudala hammocks ephothiweyo. Usihlalo we-Acapulco Rocking ugqibelele ukusetyenziswa kwangaphakathi kunye nokusetyenziswa kwangaphandle, ngezinto ezinomelele ngokwaneleyo ukumelana nayo nayiphi na imozulu yangaphandle. Ngoyilo oluyilo olwahlukileyo, luyakwazi ukuziqhelanisa ngokupheleleyo nazo zonke iintlobo zomzimba kwaye lunokusebenza ngokugqibeleleyo ngokugqibeleleyo. Uyilo lukwavumela isitulo ukuba siphefumle kakuhle ukuze sisebenze kakuhle nakwindawo ezinomswakama okanye ezitshisayo.
(Jonga esi sihlalo sikunyikimisayo senkulungwane yeshumi kunye ne-ottoman eWayfair)
Esi sihlalo sitshintshisayo senza imbeko kuyilo lwangoku lwenkulungwane kwaye libandakanya izinto ezahlukeneyo zoyilo lwe-retro ukuyinika ubugcisa bendabuko, bokuvuna. Iseti iza ne-ottoman iqabane elenza ukuba likulungele ukuthethelela kunye nokubeka iinyawo zakho phezulu. I-polyester yelinen ephothiweyo yelaphu yinto ehambelana ngokupheleleyo nesakhelo esimnyama, somthi kunye nokugqitywa kwesityebi se-walnut. Olu hlobo lwefanitshala eguquguqukayo kunye nala maxesha inokusetyenziswa kwiindawo ezininzi zokuhlala; ihamba kakuhle kwigumbi lokugcina abantwana njengoko ibinokwenza kwigumbi lokuhlala.
(Jonga esi sihlalo sisitye sinyikima ngesitayile somgqomo eWayfair)
Esi sihlalo sihle somgqomo sisitayile esine-cottage style aesthetics sihle kwaye siyamema. Kwimeko yesi sihlalo sinyikimayo, ine-velvet entsonkothileyo entle ukongeza kwisitayile sayo kunye nentuthuzelo, inezinto ezongeziweyo ezenziwayo zokuba zisuswe ukuze kwenziwe ukucoca kunye nokugcina kungabikho kobunzima. Ukutshintshwa kweengalo ezivuthayo kuyilo olungqongqo lwangasemva kunye neprofayili emxinwa ekulungele ukufundwa kwe-nook kwigumbi lokulala okanye kwindawo encinci.
(Jonga esi sihlalo sidlalayo IAmazon )
Eli rhamncwa likamva, itekhnoloji enxibe isitulo sokugungqa yenye yeyona mizekelo mihle yokwenzekayo xa uxuba itekhnoloji yale mihla kunye neziqwenga zefenitshala ezivavanywe ixesha njengesitulo esigungqisayo. Esi sihlalo sokudlala siphakanyisiwe ngendwangu entofontofo, ephefumlayo eyenza ukuba ilungele ixesha elide lokudlala. Inika izithethi ezakhelwe-ngaphakathi kunye netekhnoloji ye-AFM enomdla kumava emidlalo ahlukileyo kunye nolonwabo. Inesamkeli somsakazo esingenacingo, ukuphumla kwentloko, kunye neengalo zesibhamu.
(Jonga esi sihlalo si-rocky blue rocking eWayfair)
Esi sihlalo sinyikimayo siyilelwe kanye njengokuba ubuya kwenza isitulo sengalo esiluhlaza esiluhlaza, umahluko kuphela ekubeni sisiseko sokugungqa isitulo emazantsi. Izihlalo ezixhonyiweyo kunye neengalo zelaphu le-suede elincinci elinamaqhosha afakwe ngasemva ukuyigcina ijongeka ngathi inesitayile kwaye yeyangoku. Imilenze engezantsi iyasuswa ngokupheleleyo, ilungele ukulungiswa okanye utshintsho olunokuthi uthathe isigqibo sokwenza kwixesha elizayo. Ubhedu obunqamle-entloko bokucheba yinto entle kwaye luhamba kakuhle ngesikimu sombala oluhlaza okwesibhakabhaka esimnyama.
(Jonga esi sihlalo sangaphandle sokugungqa isitulo eWayfair)
Yakhiwe ngomthi we-eucalyptus ozinzileyo kunye ne-resin wicker esi sihlalo sangaphandle sokugungqa isitulo siyathandeka kwaye siyamema. Usihlalo unembonakalo enomtsalane enokusebenza ngefenitshala eyahlukeneyo yeenkuni ukwenza indawo entle yokuhlala ngaphandle. Usihlalo unokukhuselwa kusetyenziswa ioyile edibeneyo ukunceda ukukhusela ukugqitywa kweenkuni zendalo.
(Jonga esi sihlalo saseDenmark sisitulo esijijayo eWayfair)
Eli qela lodidi lwezemidlalo lunesitayile, licocekile ngobuhle baseDanish kunye nomgangatho wobugcisa. I-Nikanor inomqolo ophakamileyo oxhonywe kwilaphu eligudileyo, ngwevu kunye neqhosha elibekwe kakuhle elirhola ukubonakala kwelo xesha. Isiseko sesitulo ezemidlalo esiqinileyo iirubberwood, zityebile ngokugqibeleleyo kumnyama wokugqibela wenalnut. Ngokubanzi, esi sihlalo sigungqisayo sikhangeleka silumkile, sinamhlanje kwaye sinobuhle kodwa ezemidlalo uyilo oluhle olugqibeleleyo kwiintsapho nakubazali abatsha.
(Jonga esi sihlalo sipinki si-velvet IAmazon )
Ngoyilo oluphucukileyo lweli xesha esi sihlalo sipinki si-velvet sinyibilikisiwe kwaye sihamba kakuhle. Izinto zevelvet zithambile kwaye zikhululekile zenze ukhetho olukhulu lokuphumla emva kosuku olude. Ilungele umntu ofuna ukwenza ingxelo kunye nokuzisa umlinganiswa othile kwigumbi lakhe. Usihlalo ukwakhona nge-teal, beige, green and blue.
(Thenga esi sihlalo sinyikima sibanzi eWayfair)
Ngoyilo olongezelelekileyo olubanzi esi sihlalo sinyikimayo sinamagumbi amaninzi okwabelana kwaye siwathimbe. Usihlalo uyilelwe ukuba ube yi-1/2 enkulu njengesihlalo sokugungqa kwendabuko esikhulu ngokwaneleyo kubantu abadala ababini okanye kubantwana abancinci abancinci lukhetho olukhulu koomama abatsha okanye kwiintsapho ezinabantwana abancinci. Imiqamelo ye-polyester intofontofo kwaye amatye e-cherry e-rock abonelela ngokushukumiseka okugungqisayo.
USihlalo weHomall Gaming nguSihlalo we-Back Back… $ 109.99$ 149,99 umthengisi ogqibelele (47038) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IKharavani yaMazwe ngaMazwe Ivaranda yesiqhelo… $ 200.49 umthengisi ogqibelele (Shumi elinanye) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Izipho zonyaka wesibhozo zomtshato
USihlalo oGqwesileyo we-PC yeMidlalo ye-Ergonomic Offi… $ 82.99$ 94.99 umthengisi ogqibelele (25709) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iseti yokuGcina indawo yaseMagshion yeeF ezi-2 eziPhezulu… $ 239.99 umthengisi ogqibelele (134) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
izipho zomfazi ngekrisimesi
izihlangu zomtshato oluhlaza isithende esisezantsi
isitulo sokuxhoma igumbi lokulala
imiyalezo yothando kuye